सैन मार्टिन डे Porres को लागी प्रार्थना। ? जनावर र बिरामी को लागी।
पोर्रेसका सेंट मार्टिनलाई प्रार्थना, एक बलियो हतियार हो जसले एक बलियो र स्वस्थ विश्वास कायम राख्छन्। को प्रार्थना सैन मार्टिन डे Porres यसले धेरै मेडिकल केसहरूमा र salvation्गका मानिसहरूलाई समावेश गर्दछ।
उहाँ जीवित छँदा, यो गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका साथ अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूको लागि सहयोगी थियो।
सान मार्टिन डे पोरस दक्षिण अमेरिकामा धेरै लोकप्रिय संत थिए किनकि उनको beatication भन्दा धेरै पहिले उहाँमा जिम्मेवार धेरै चमत्कारहरू थिए।
1 सेन्ट मार्टिन दे पोरेसलाई प्रार्थना सेन्ट मार्टिन दे पोरेस को हो?
2 जनावरहरूको लागि सैन मार्टिन डे पोर्रेसलाई प्रार्थना
3 सान मार्टेन डे पोर्रेसलाई बिरामीहरूको लागि प्रार्थना
3.1 म कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
सेन्ट मार्टिन दे पोरेसलाई प्रार्थना सेन्ट मार्टिन दे पोरेस को हो?
ऊ लिमामा जन्मेको थियो, १ 1579 in मा पेरू, दुई भाइहरू मध्ये जेठा छ, आफ्नो पेरू बुबा र उनकी आमा पनामा मा जन्म भएको छाला र color्ग को एक महिला।
जब उसको बुबाले आफ्नो परिवारलाई स्वीकारेनन्, उनी दो Is्गा इसाबेल गार्सियाको जिम्मामा थिए जो सान लजारोमा बस्छन्, र color्गका मानिसहरूले बसोबास गरेको सहरमा।
सानै उमेरमा उनले एपोथेक्रीको रूपमा प्रशिक्षण लिन थाले र त्यहाँबाट उनको महान प्रशिक्षुता सुरु भयो संसार औषधीको।
उनले आफ्नो धार्मिक तयारी सुरु गरे डोमिनिकन कन्भेन्टमा हाम्रो रोजेरी महिला तर ऊ आफ्नो छालाको रंगको mulatto टोनका कारण धेरै अस्वीकृत भयो।
यद्यपि मार्टिन आफ्नो बानीमा अडिग रहे, प्रारम्भिक प्रार्थनाहरूमा भाग लिए र आफ्नो गतिविधिहरूमा कुनै बेवास्ता गरेनन, अरूको लागि उदाहरण बने।
उपचारको लागि उसको वरदान मानिस र जनावरहरूमा देखियो, मार्टिनले उपचार गरेका सबै बिरामीहरूले तुरुन्तै उपचार प्राप्त गरे।
यो उसलाई प्रसिद्धि को एक बिट र पहिले नै प्राप्त गरे बिरामी उहाँहरूको हेरचाह गर्न चाहन्थे.
भनिन्छ, निको पार्ने वरदान बाहेक अरू कसैलाई पनि प्रदान गरिएको थियो, जस्तै अन्य भाषाहरूको वरदान र उडानको उपहारसमेत।
जनावरहरूको लागि सैन मार्टिन डे पोर्रेसलाई प्रार्थना
धन्यबाद, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर, सबै जीवित प्राणीहरूको सृष्टिकर्ता।
सृष्टिको पाँचौं र छैटौं दिनमा तपाईंले समुद्रमा माछा, हावामा चरा र पृथ्वीमा जनावरहरू सिर्जना गर्नुभयो।
तपाईंले सान मार्टेन डे पोर्रेसलाई सबै जनावरहरू आफ्ना भाइ-बहिनीहरूको रूपमा लिन प्रेरित गर्नुभयो। हामी तपाईंलाई यो जनावरलाई आशीर्वाद दिन सोध्छौं।
तपाईंको प्रेमको शक्तिले, [पशु] लाई तपाईंको इच्छा अनुसार बाँच्न दिनुहोस्।
तपाईंको निर्माणको सबै सुन्दरताको लागि सँधै प्रशंसा हुन्थ्यो। धन्य, तपाईं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्ना सबै प्राणीहरूमा!
विश्वासको साथ जनावरहरूको लागि सेन्ट मार्टिन दे पोरेस प्रार्थना गर्नुहोस्।
हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूको स्वास्थ्यको लागि सोध्नुहोस् यो प्रेमको एक कार्य हो धेरै मानिसहरु यो समय को बर्बादी हो लाग्छ।
हाम्रो घरपालुवा जनावरहरू र सडकको स्थितिमा भएका मानिसहरू, तिनीहरूको नस्ल वा पशु जस्तोसुकै भए पनि, उनीहरूको सान सान मार्टेन डे पोरिसमा सहयोगी छ जसले उनीहरूलाई स्वास्थ्य प्रदान गर्न सक्छ ताकि उनीहरू स्वस्थ जीवन प्राप्त गर्न सकून्।
सान मार्टेन डे पोर्रेसलाई बिरामीहरूको लागि प्रार्थना
प्रिय सैन मार्टिन डे पोर्रेस।
नम्र, अथाह विश्वासको पवित्र, तपाईलाई ईश्वरले अकल्पनीय चमत्कार गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ, आज म तपाईहरुसंग यस आवश्यकता र दु: खमा आएको छु जसले मलाई निराश तुल्यायो।
मेरो संरक्षक र मेरो डाक्टर, मेरो अन्तर्बिन्तीकर्ता र ख्रीष्टको लागि प्रेमको मार्गमा मेरो शिक्षक बन्नुहोस्।
तिमीहरु जो परमेश्वर र आफ्ना भाइहरु लाई माया गर्छौ, सँधै खाँचोमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न अथक प्रयास गरिरहेछौ, यो कुरा ज्ञात छ कि परमेश्वरले तपाईंलाई एकै समयमा बिभिन्न ठाउँमा रहन शक्ति दिनुहुन्छ, ख्रीष्टको प्रेमको लागि, तपाईका सद्गुणहरूको प्रशंसा गर्नेहरूलाई सुन्नुहोस्।
म परमेश्वरमा तपाईको सामर्थी एकतामा भरोसा राख्छु, कि प्रभुको सामुन्ने बिन्ती गर्दछु कि तपाई जस्तो शुद्ध आत्माको अघि सबै भलाइ हुन्छ, मेरा पापहरू क्षमा हुनेछ र म दुष्टता र दुर्भाग्यहरूबाट स्वतन्त्र हुनेछु।
मलाई तपाईंको प्रेम र सेवाको भावसम्म पुग्नुहोस् ताकि म मेरा दाज्यू-भाइहरूलाई दिनेछु र तपाईंको भलाइ गर्नका निम्ति मायालुपूर्वक तपाईंको सेवा गर्न सकूँ।
के मैले तपाईलाई खोजेको छु, कसरी, अरुलाई भलाइ गर्दै गर्दा, मेरो आफ्नै पीडाबाट छुटकारा पाएको छु।
तपाईको नम्र उदाहरण तपाईको पछिल्लो स्थानमा रहनुहोस्, मेरो लागि ज्योति होस् ताकि म कहिल्यै नम्र हुन बिर्सिनँ।
तपाईंको महान विश्वासको सम्झना, कि निको पार्ने, पुनरुत्थान गर्ने र थुप्रै आश्चर्यकर्महरू गर्न सक्षम छ, मेरो लागि श doubt्काको क्षणहरूमा, मेरो हृदयलाई ख्रीष्टको लागि बिना शर्त प्रेमको आगोले भरिदिएको अनुग्रह हो।
स्वर्गीय बुबा, तपाईंको विश्वासी सेवक सेन्ट मार्टिनको योग्यताले मेरो समस्याहरूमा मलाई मद्दत गर्नुहोस् र मेरो आशालाई अलमल्लमा नपार्नुहोस्।
"हाम्रा माग्नुहोस् र तपाईले ग्रहण गर्नुहुनेछ" भनेर प्रभु, हाम्रा येशू ख्रीष्टले नम्र भएर बिन्ती गर्दछु कि, सेंट मार्टिन डी पोरिसको मध्यस्थताबाट तपाईंले यो बिन्ती सुन्नुहुनेछ।
म प्रेमबाट सोध्छु, मलाई अनुग्रह दिनुहोस् यदि यो मेरो प्राणको भलाईको लागि हो भने।
म हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट यो सोध्छु।
बिरामीहरूको लागि सेन्ट मार्टिन दे पोरेसको प्रार्थना चमत्कारिक छ!
सधैं एक रोग को माध्यम बाट जाने यो एक सबै भन्दा कठिन प्रक्रियाहरू हुन् जुन प्रत्येक जीवित चीजहरू हुन्छन्मानवमा यो मृत्युको पर्यायवाची छ किनकि धेरै रोगहरूको कुनै वैज्ञानिक उपचार हुँदैन।
यद्यपि त्यहाँ एउटा शक्तिशाली हतियार छ जुन विश्वास हो जुन प्रार्थना मार्फत काम गर्दछ।
तपाईं जहिले पनि कुनै पनि रोगको उपचारको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ, सन्तहरू र विशेष गरी स्यान मार्टेन डे पोर्रेस हामीलाई मदत गर्न इच्छुक छन् र हामीलाई हाम्रो शरीर वा परिवारको सदस्य वा साथीलाई चमत्कारको आवश्यक छ।
प्रार्थना कुनै पनि स्थान वा शर्त बिना नै गर्न सकिन्छ।
केही व्यक्तिहरू प्रायः पारिवारिक वेदी बनाउँदछन् जहाँ उनीहरू बिहान र दिनभरि प्रार्थना उठाउँछन्, परिवार जसले सँगै प्रार्थना गर्दछन् उनीहरूले बिहानको खाजामा प्रार्थना गर्न रुचाउँदछन्, यसैले आशिष र सुरक्षित दिन सुनिश्चित गर्दछन्।
वाक्य बनाउनुहोस् उपन्यास वा प्रार्थना मा एल रोजसारियो हाम्रो जीवनमा एउटा चमत्कार हेर्नको लागि सान मार्टिन डे पोरिसमा पूरा भिन्नता हुन सक्छ।
तर यी सबै कुरामा विश्वास गर्दै यो हुनुपर्दछ कि उहाँ हाम्रो ध्यान सुन्न हरदम ध्यान दिनुहुन्छ, यदि त्यसो भएन भने हामी समयलाई खेर फाल्नेछौं किनकि प्रार्थना घरको छतमा पनि नपुग्ने छ।
यो एक शक्तिशाली हतियार हो तर यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्नु र सबै भन्दा माथि, सँधै तपाईले हामीलाई दिनु भएको चमत्कारको लागि धन्यवाद दिन सम्झन।
सान् मार्टिन डे पोर्रेसको प्रार्थनाको लागि तपाईले सहयोग पुर्‍याउनुभएको आशा छ।
स्यान एलेजोका लागि कडा प्रार्थना